Jonga ulungelelwaniso lwe-UTM kwiiMephu zikaGoogle, kwaye usebenzisa NAKUPHI! enye inkqubo yokulungelelanisa-iGeofumadas
NgoJulayi, 2012 Iiphotography, ezintsha, Ukuprinta kokuqala
Kuze kube ngoku kwakuqhelekile ubona i-UTM kunye neendawo eziququzelelwe kwiGoogle Maps. Kodwa uhlala ugcina i-datum exhaswa nguGoogle eyi-WGS84.
Kuthekani ukuba sifuna ukubona kwiGoogle Maps, ulungelelaniso lwaseColombia kwi-MAGNA-SIRGAS, iWGS72 okanye i-PSAD69?
Ulungelelaniso lweSpeyin e-ETRF89, iMadrid 1870 okanye i-REGCAN 95?
Kwaye malunga nokulungelelaniswa kweMexico kwi-GRS 1980 okanye kwi-International 1924?
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo kukho inkqubo ekuvumela ukuba wenze oko, kwaye yiPlexScape WebServices. Ukusuka kubahlobo bamaGrike abadali bePlex.Earth, edibanisa idatha phakathi kweGoogle Earth kunye ne-AutoCAD, ehamba ngendlela eyenza ukutshaya kakhulu kwi-AutoCAD 2013 eyatshintshe imithetho yomdlalo.
Kwaye le nkonzo yePlexScape ayixhasi nto Iinkqubo ze-3,000 zokulungelelanisa kunye ne-400 Datums, efanayo ne-Plex.Earth ixhasa.
Masibone uvavanyo: Ndiza kuzama ukucacisa inyathelo ngesinyathelo kuba ngokunyanisekileyo i-interface ayikho intuitive ekuqaleni kokubona:
Ngoku ndihlala eBotot kwaye ndinomdla ekuboneni umehluko woqhagamshelwano phakathi kweWGS84 kunye neSIRGAS:
Ewe, cinga ukuba ndijikelezileyo Topoequipment, njengoko kuboniswe kwimephu:
IiNkonzo zeWebhu zePlexScape, zineenkonzo ezintathu okwangoku: Enye elula yokulandela umkhondo ukwazi ukulungelelaniswa kwenqaku (Ukuququzelela ukulandelela), enye ukufumana amaphupha kwimaphu kwaye uyithumele kwi-kml / txt (Vula i-Digitizer) kwaye enye enye esiya kuyisebenzisa ngoku, esibiziweyo Ukuguqula iiNxibelelaniso.
1. Khetha iNkqubo yeMvelaphi
Ngenxa yoku sikhetha kwithebhu engasekhohlo, ilizwe elinomdla kuthi. Kule meko, iColombia, kwaye xa sele ikhethiwe, siza kubonisa iWGS84 njengeDatum yomdla.
Phakathi kwethebhu yobude / yobude kunye ne-Easting / Norting kukho iindlela ezahlukeneyo zokhetho. Into enomdla ukuba indlalwe lilizwe kuba ibiya kuba yinto ephambeneyo ukuyikhangela phakathi kwezinto ezininzi ezixhaswa yinkqubo.
2. Indawo yentsusa
Ngenxa yoku, ukuba sinendawo enomdla kuthi ebonakalayo kwimephu, sihambisa imouse ngaphezulu kwe icon engezantsi kwaye ukhethe «Faka umnqaku kumaphu«, Oku kuya kusibonisa inqaku elinomdla kwimephu. Emva koko siyirhuqela kanye kwindawo kanye esifuna ukuyifumana. Kuyafana nokwenziwa kwiithebhu eziphezulu, kodwa kubonakala kufanelekile ukuyenza kwi icon kwaye ndiza kuyibonisa ngale ndlela kulo lonke ixesha lokuzilolonga.
Ukuba sifuna ukwazi ukulungelelanisa indawo apho siyifumene khona, emva koko siphinde sibuyele kwi icon kwaye sikhethe u-Fumana iinqununu ukusuka kumakishi«, Ngale nto kwiphaneli yethu yokulungelelanisa kuya kubonakala.
Kwaye ukuba esikufunayo kukubeka ulungelelwaniso oluthile, ngoko siyibhala kwiphaneli kwaye sityhutyha ngaphaya kwe icon esonyulayo «Beka uphawu kumakhonkco«, Kwaye ngale nto inqaku liya kuba kulungelelwaniso olusithandayo.
3. Jonga ulungelelaniso lwe-UTM
Ukwazi izilungelelaniso ze-UTM zale ndawo, kuya kufuneka sibonise indawo ekubhekiswa kuyo. Ukuba sinokungabaza, sinokukhetha enye yazo, kwaye ngokhetho «Bonisa imida»Indawo ephawulwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka iyavela. Uncedo olukhulu kuba masikukhumbule oko IColombia ayifuni kuphela kwiindawo I-17 emaNtla, i-18 emaNtla kunye ne-19 emaNtla kodwa ikwindawo enye kodwa emazantsi okoko ilizwe liwele i-Ecuador kunye noko kwehla kwimimandla emithandathu. Yiyo loo nto belungelelanise inkqubo yabo yemimandla ebenza nzima ubomi babo.
Kule meko, sikhethe indawo ye-UTM 18 N kwaye ngokuqinisekileyo, sibona ukuba kukho iphuzu lethu.
3. Hambisa ulungelelwaniso ukusuka kwiqela lasekhohlo ukuya ekunene
Ukuza kuthi ga ngoku, into esiyibonileyo yindlela yokubonisa ulungelelwaniso lwe-UTM kwiiMephu zikaGoogle. Kodwa sinomdla wokubona ulungelelwaniso olufanayo kwenye inkqubo yokulungelelanisa, kwimeko ye-MAGNA-SIRGAS. Kuqala, sisebenzisa utolo oluhlaza ukubonisa ukuba uququzelelo olufanayo liguqulelwe ukusuka kwicala lasekhohlo ukuya kwicala lasekunene. Oku kwenziwa ngonqakrazo kwaye into enomdla kuthi kukuba omabini amacala ayafana.
Ngoku ukwenza isikhombisi esifanelekileyo, senza okufanayo: Siphakamisa imouse ngaphezulu kwe icon, kwaye ukhethe «Faka umnqaku kumaphu«. Ukuba iwela kwenye indawo, sikhangela indawo kwakhona kwaye sibonise «Hambisa umakishi kwimephu yeziko»Kwaye ukuhambelana nokulungelelanisa«Beka uphawu kumakhonkco«.
Umqondiso wokuba yonke into ilungile kukuba isikhombisi esiluhlaza masibe kwindawo efanayo nesikhombisi esimdaka ukuba inkqubo yokulungelelanisa iyafana kuzo zombini. Inomdaka, kodwa iyasebenza.
4. Yazi ulungelelwaniso lwe-WGS84 kwi-SIRGAS
Ngale nto sitshintsha ukusuka kwi-WGS84 ukuya kwi-SIRGAS kwiphaneli elungileyo. Kwaye emva koko sihamba ngaphezulu kwe icon kwaye sithi «Fumana iinqununu ukusuka kumakishi«, Ke sifumana ulungelelwaniso lwenqaku esele sinalo kodwa kwenye inkqubo. Qaphela ukuba kwi-lat / lon ulungelelwaniso luyafana, kwaye i-SIRGAS isekwe kwi-WGS84.
Kodwa ukuba sijonga okwenzekayo kwiiyunithi ze-UTM, ulungelelwaniso lwe-X lwahlukile ngeesentimitha ezi-3 kwaye u-Y ulungelelanisa enye isentimitha. Esi sizathu sokuba kunokuthiwa zombini ezi nkqubo ziyalingana. Njengoko sihamba, lo mahluko utshintsha kwiimilimitha. Ndiyacacisa ukuba oku kuhambelana neeparameter ezilungiselelwe iiNkonzo zeWebhu zePlexScape, nantoni na engaqhelekanga kufuneka ixelwe kuba yenzekile kum amaxesha ambalwa ngaphambili.
5. Yazi ulungelelwaniso kwiPSAD
Sinokukhetha nayiphi na enye inkqubo, kwaye sicela ukuba ukulungelelaniswa kubuyiswe kunye «Fumana iinqununu ukusuka kumakishi«. Isikhombisi akufuneki sihambe, kuba sikwindawo enye, into ebuyisayo lulungelelwaniso kwenye inkqubo. Kwimeko ye-l, kwi-PSAD 1956 kwa eli nqaku linye linonxibelelaniso X = 604210.66 Y = 512981.6.
Khawufane ucinge, emva koko, ukuba le nto sifuna ukuyibona ilungelelanisa kwangoku kwiinkqubo ezimbini (hayi inqaku elinye), emva koko sikopa ukulungelelanisa ukusuka ngasekhohlo uye kwicala lasekunene emva koko «Beka uphawu kumakhonkco»Kwaye apho sinayo. Ulungelelwaniso olufanayo apha ngezantsi, kuzo zombini iipaneli, kodwa indawo eluhlaza okwesibhakabhaka iwela kwiimitha ezingama-228 ngasentshona kunye neemitha ezingama-370 ukuya emazantsi.
Isixhobo sePlexScape Web Services sinomdla. Ngokwam ukuqonda. Siza kuthetha ngolunye usuku ngenye yeenkonzo zayo, ezinye zazo ezihlawulwayo, kubandakanya nokuguqulwa okufanayo kwifayile enamanqaku amaninzi.
Yiya kwiphepha leNkonzo yeeNkonzo zePlexScape
Funda kabanzi malunga ne-UTM Coordinates
Post edlulileyo«Ngaphambilini Velisa amacandelo cross CivilCAD
Post Next Iinkqubo zokulungelelanisa i-UTM eziboniswe kwiGoogle MapsOkulandelayo »